‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’ – पुरा पढ्नुहोस « Sajha Page
‘छ्या भिनाजु के गर्नुभएको यस्तो ? म निथ्रुक्कै भिजिसकेकी छु’ – पुरा पढ्नुहोस
– दिलमान गुर्मछान/नारी मासिकबाट
काठमाडौं । यस्तो किन हुन्छ त्यसैले आज थोरै लेख्दै छु मन परे शेयर वा कपी गरेर पेज मा बा वाल मा लेखि दिनु होला। जब एउटा प्रदेशी मिठो सपना बोकेर प्रदेश पसेको हुन्छ।आफ्नो प्राण भन्दा प्यारी प्रेमीका वा श्रीमती साथ मा बा-आमा र छोरा छोरीलाई छोडेर प्रदेशको भुमीमा आफ्नो पसिना र रगत संग लड्दै भविष्यको मिठो कल्पना गर्दै प्रदेशी दिनहरु बिताउँछन ।
सुतेकी छोरीलाई दुध चुसाउनु मन लाग्यो तर ब्यूझेर रून्छ कि भनेर छोडेर विदेश हिडेँ – दिपिका भुसाल
सामाजिक, नैतिक समस्या हरुमा जेलिएर एउटा मनोबैज्ञानिक भुमरीमा फसेको मान्छेले आफ्नो अवस्था सजिलै थाहा पाउन सक्दैन रहेछ । आफ्नो वास्तविकता के हो र आफुले मेहनत गरेरै आफ्नो जिन्दगीको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने कुरा मैले महसुस गर्दा समय निकै घर्किसकेको थियो । लगातार भोगिरहेको भौतिक क्षति र आर्थिक समस्याकै कारण आफुले नपाउनुपर्ने दुख पाइरहेको कुरा मैले बुझ्ने समय आउदा मलाइ आफुले धेरै ढिलो कुरा बुझेको मा आत्मा ग्लानि हुँ सुरु भैसकेको थियो । फेरी पनि म मेरा दुखको निराकरणको खोजीमा र मेरा साना साना नाबालक छोरी हरुको भविष्यको चिन्ताले मलाई देश छोडेर बिदेश पलायन हुन बाध्य बनाउदै थियो ।
एजेन्सी मार्फत मलाई इजरायलको भिषा निस्किन सबै प्रकृया तयारी अबस्थामा रहेको हुदा मलाई पनि तयारी अबस्थामा रहनको लागी जानकारी गराएका थिए । त्यति बेला दशै र तिहार छोरी हरु संग मनाएँ । तिहार सकियो । तिहारको लगत्तै मेरो भिषा पनि आएको खबर पाएँ । मेरो छोरी हरु संगको दशैंको खुशी अचनाक शोकमा बद्लियो ।एकातिर आफुलाई अथाह दुखको भुमरी बाट पार लगाउने एकमात्र बिकल्प को ढोका खुलेको छ अर्को तिर कल्कलाउदा दुधे सन्तान लाइ चटक्कै छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो । मैले मन भरी अथाह पीडा महसुस गरें । छोरी हरु सानै छन् । अहिले सम्म राम्ररि आवाज निस्केको समेत छैन । म जतिसुकै पिडामा हुदा पनि अथवा जस्तो सुकै सास्ती भोग्न परेको अवस्थामा पनि मेरी छोरी हरुलाई मेरो काख बाट टाढा गरेकी थिईन । जस्तो सुकै पीडा र समस्यामा समेत टाढा नगरेका आफ्ना मुटुका टुक्रा लाइ बर्षौंको लागि छोडेर टाढा हुने मेरो दिन नजिकिदै थियो ।
सधैं जसो आज पनि छोरीहरु संगै सुत्ने प्रयास गरे । निद्रा हराएको थियो । सानो छोरी मेरो छाति तिर छामछुम पार्दै थिई । ती कोमल हात हरुले आफ्नो अन्तिम घुट्को खाना खोज्दै थिई सायद । उसलाई के थाहा भोलि देखि यो छातीको न्यानो देखि बिमुख हुदैछु भनेर । ती निर्दोष ओठहरुले मेरो स्तान सुस्तरी चुस्दै थिई ! मेरो मन भरिएर ब्याकुल बनेको थियो । आँखा बाट अश्रु धारा बगेको थियो । ठूलो छोरी मेरो कपडा समातेर गहिरो निद्रामा थिई । म सानो छोरीलाई निदाउने बनाउने प्रयत्नमा थिएँ । मेरो निद्राको सुदुर क्षितिज् सम्म कुनै नामोनिसान थिएन । थियो त केवल हृदय बिष्फोट होला जस्तो भक्कानो बाँकी थियो जुन भक्कानो लाइ फोडेर म छोरी हरुको निद्रा खल्बल्याउन चाहिरहेको थिईन ।
भालेको डाक संगै आमाले सुस्तरी मलाइ उठेर तयार होउ… अहिले छोरी हरु उठछ्न भन्नू भयो । छोरी हरु न उठ्दै मैले घर छोडीसक्नु पर्ने थियो । म हिड्ने बेलामा नानि हरु रोलान र त्यो रुवाईले मलाइ बिचलित बनाउला भनेर आमाले मलाइ नानि हरु न उठ्दै साईत गर्न सुझाउनु भएको थियो । मैले मेरो भक्कानो किलकिले मै दबाएँ । नराम्रो संग पोले जस्तो भयो र नाक पुत्तायो र आँखा बाट फेरी एक तहरो झरी बर्षीयो । म उठेर तयार भएं । तयार त के हुनु थियो र लिएर हिड्ने झिटी गुन्टा तयार नै थियो । खालि काखमा रहेका छोरी हरुलाई भुईमा राख्नु बिसाउनु बाकी थियो । मैले त्यो पनि गरें र उठेर हिड्न तयार भएँ ।